सी जिनपिङले चाइनिज बोल्दा प्रचण्डले कसरी बुझे ? - E ALL NEPAL
HomeAll PostsUncategorizedसी जिनपिङले चाइनिज बोल्दा प्रचण्डले कसरी बुझे ?
११ कात्तिक, काठमाडौं । भारतको गोवा भ्रमणका बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग लामो एवं अन्तरंग कुराकानी गरेको यसअघि नै चर्चामा आइसकेको छ । तर, भाषाको एउटा ‘जादू’का विषयमा भने खासै चर्चा भएको छैन ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने- सी जिनपिङले चाइनिज बोल्नुभो, मैले अंग्रेजीमा सुनें । मैले सुन्दा अंग्रेजी सुनिने, उहाँले बोल्दा चाइनिज बोल्ने !
दुई नेतावीचको भएको माध्यम भाषाबारे जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने- ‘डेलिगेसन लेभलमा सी जिनपिङले चाइनिज बोल्नुभो, मैले अंग्रेजीमा सुनें । मैले सुन्दा अंग्रेजी सुनिने, उहाँले बोल्दा चाइनिज बोल्ने ।’
त्यसैगरी आफूले अंग्रेजीमा बोलेको कुरा सी जिनपिङले चाइनिज भाषमा सुनेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए । उनले भने- ‘मैले अंग्रेजीमा बोलें, उहाँले चाइनिजमा सुन्नुभो ।’
तर, नेपाली भाषामा बोलेको कुरा अंग्रेजीमा सुनिने प्रविधि कहिले भित्रिएला ? योचाँहि प्रतिक्षाकै विषय हो ।
पटक हेरियो: 21,158